Sidee baad ka daawan karaa YouTube on Roku
Ciyaaryahanka video digital Roku waa sanduuq yar oo isku keena videos, Cajalado iyo content web kale. Roku Ciyaaryahanka soo baxay sanadkii 2008, iyo waa qalab ka go'an in ay TV Internet u saamaxaya kuwa isticmaala si uu u daawado barnaamijyada warbaahinta Internet ee TV'yada ay. Si loo sameeyo Roku ka shaqeeya, waxaad u baahan tahay oo dhan waa laptop ama computer internet-xawaaraha sare ah oo ah xisaab Roku lacag la'aan ah oo aad oo dhan qarka u saaran inay ku raaxaystaan ​​content web iyo videos hoorto on baahida.
Ciyaaryahanka video digital Roku bixiyaan ballaaran channels internetka si uu u daawado filimada, videos iyo muusiko dhegayso, radio. Fursadaha waxaa ka mid ah Netflix, Hulu Plus, Amazon, Crackle, radio TuneIn, Spotify iyo wax ka badan wax badan. YouTube sidoo kale ku degay Roku dhawaan, kaas oo u ogolaanaya dadka in ay sii qulquli kun oo videos si xor ah. Haatan aan aragno sida uu u daawado YouTube on Roku si fudud.
Qaybta 1aad: Sida loo daawado YouTube on Roku
Qeybta 2: Sida loo hubiyo haddii qalab aad waa qalab Roku diyaar certified
YouTube videos ahaayeen adag tahay in la daawado on Roku ilaa dhalashada Roku 3. Roku 3 milkiilayaasha hadda codsiga YouTube ee ay geeyo dhigay sanduuqa sare ku raaxaysan karaan. Sidaas, aynu bartaan sida loo rakibi YouTube channel midig Roku ka talaabo dukaanka channel talaabo.
Talaabada 1: Isku Roku in aad TV kordhin network WiFi aad. Markaas login in in aad xisaabta Roku hore.
Tallaabo 2: Ku dar YouTube channel. Isticmaal shaqo raadinta iyo nooca in YouTube channel. Waa lacag la'aan ah oo uu leeyahay tiro badan oo ratings wanaagsan. Just heli guji Add Channel iyo daqiiqo oo kaliya dhowr YouTube channel waxaa lagu dari doonaa si aad Roku account.Now, guji badhanka "Tag uga billowdo" ama "My channel" on Homepage, oo aad arki doonaa kan xaqa ah hadalkiisa raaciyay " YouTube channel "oo ay la socdaan channel kale waa in aad ku daray ee la soo dhaafay.
Stpe 3: Guddi xisaabtaada YouTube . Helaan calaamada in si xisaabta link via YouTube Roku oo arbushin doonaa code 8-god ah si aad u bilowdo xisaabtaada YouTube. Just la saxiixato in aad xisaabta iyadoo la isticmaalayo laptop ama casriga ah iyo geli furaha u xiri Roku la xisaabtaada YouTube.
Stpe 4:. Device Labo Xidig Waxaad xubnuhu kartaa telefoonka, kiniin ama laptop la xisaabtaada Roku. Ka dib markii kaakicin xisaabtaada YouTube, Roku idin ​​siin doonaa code kale si xubnuhu qalab aad digital la. Access www.youtube.com/pair link ka qalab aad door bidayso iyo geli furaha siiyey Roku. Haddii kale, waxaad iskaan karaa code isticmaalaya code akhristaha QR ku saabsan telefoonka.
Talaabada 5:. Raaxaysta Hadda aad daawashadeeda u riyaaqeyso YouTube on Roku.
Qeybta 2: Sidee si aad u hubiso haddii qalab aad waa qalab Roku diyaar certified
Waxaad si fudud u tegi kartaa link si aad u hubiso haddii aad qalab ama TV model ku qoran yahay waa in uu u hubiyo in uu yahay qalab Roku-diyaar. Haddii aad raadineyso inay soo iibsadaan TV cusub, si loo hubiyo in uu leeyahay MHI (Mobile High-Qeexid Link) booska talooyin ah in aad is geliso ul flash-drive raadinaya loo yaqaan Roku Streaming ul. Waa midab ciyaaryahan yar yar oo guduudan geeyo warbaahinta u saamaxaya inaad isticmaasho fog qalab ee ay sameeyaan loo xakamayn lahaa.
> Resource > YouTube > Sida loo Daawo YouTube on Roku